Bixiyeyaasha Mashiinnada Kaabayaasha ah iyo Warshad - Soosaarayaasha Mashiinnada Kaabayaasha Shiinaha
Bag Qiimaha PP otomaatiga ah oo buuxa ...
Qashinka Yarn Bobbin Nadiifinta ...
Mashiinka Mashiinka ...
Mashiinka ciridka (Dhaqaalaha ...
Mid ka mid ah kuwa soo baxa Laba Lamin ...
NX Taxanaha 4-800 (Synchronou ...
Xakamaynta Kombuyuutarka 6 Midab BO ...
Mashiinka Tolmada Bacda Raschel
(Caadi) Leno & Mesh B ...
Wareegtada gooynaya Dambiisha mesh
Wareeg wareeg ah (6 Shuttles)
Wareeg wareeg ah (4 Shuttles)
Mashiinka fuuli jiray Cam
PP Flat Yarn Extruder (PP aniga ...
PP-xidhkii Sibidhka Samaynta Bacda ...
Goynta Kulul iyo Qabowga Qabow ...
Otomaatiga goynta & In ...
Otomaatiga goynta & Se ...
Tolida otomaatiga ah & Pri ...
Tolli Toos ah & Kulul ...
Jarida otomaatiga ah Oo Daabac ...
Dambiisha PP-xidhkii Xiray Xiinka Se ...
Dambiisha dahaarka leh PP-xidhkii Ururinta Ma ...
Hore iyo Daabacaadda Mac ...
Mashiinka Daabacaadda (1-4) Midabbada
Dambiisha-xidhkii PP-xidhkii Mashiinka Mashiinka
Dambiisha Mesh Machine Jarida
Dambiisha PP-xidhkii Goynta Cold Cold ...
Dambiisha PP-xidhkii Goynta Hot M ...
Dambiisha PP Block hoose Madax Madax ...
Kombaresarada hawadu waa mashiin caawiya oo ka mid ah boorsooyinkeena tolmo wanaagsan leh ee loo yaqaan 'PP' oo sameeya mashiinno lagu wado wadista walxaha ku dhaca sambabada si loo dhameystiro ficilka. Kumbuyuutarka hawadeena sare ee waxsoosaarka waxaa loo isticmaalaa qufulka pneumatic, aaladda pneumatic, sicir bararka taayirka, habka afuufida, rinjiga lagu buufiyo, ciida ciida iyo walxaha dareeraha ah.
Waa mashiin caawiya oo ka mid ah boorsooyinkeena tolmo wanaagsan leh ee loo yaqaan 'PP' oo sameeya mashiinno lagu keydiyo hawo cadaadis leh oo laga soo qaado mishiinka kombaresarada hawada.
Mashiinka alxanka waxaa loo isticmaalaa in lagu kululeeyo silig iska caabinta goynta kulul.
Mashiinka Mashiinka La qaadan karo (GK-36)
Baaxadda arjiga: bacaha warqadda ah ee kraft, bacda bacriminta, bacaha daabacaadda midabka, bacaha isku dhafka ah, bacaha kiimikada, bacaha bur, bacaha bariiska, bacaha quudinta iyo bacaha kale ee tolmo wanaagsan leh iwm.
Mashiinka Mashiinka La qaadan karo (GK26-270)
Mashiinka Mashiinka La qaadan karo (GK26-1A)
Mashiinka Mashiinka La qaadan karo (GK9-825)
Mashiinka Mashiinka La qaadan karo (GK26-2A)
Baaxadda arjiga: Baaxadda arjiga: Bacaha waraaqaha ee waraaqaha ah, bacda bacriminta, bacaha daabacaadda midabka, boorsooyinka isku dhafan, bacaha kiimikada, bacaha burka, bacaha bariiska, bacaha quudinta iyo boorsooyinka kale ee tolmo wanaagsan leh iwm.
Mashiinka Mashiinka Cusub ee La qaadan karo (N640A)
Baaxadda arjiga: bacaha waraaqda ah ee kraft, bacda bacriminta, bacaha daabacaadda midabka, bacaha isku dhafka ah, bacaha kiimikada, bacaha bur, bacaha bariiska, bacaha quudinta iyo bacaha kale ee tolmo wanaagsan leh iwm.